News – Page3– Myanmar Golf Federation | MGF Golf Club
Junior News, NewsBy MGF August 16, 2018
NewsBy MGF August 16, 2018
မြန်မာနိုင်ငံဂေါက်သီးအဖွဲ့ ချုပ်သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းလို ပါလျှင် မည်သူမဆို အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ ဦးသိန်းတိုးအောင် ၊ရုံးအဖွဲ့ မှူး ၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း – 09-430 81 032 အဖွဲ့ ချုပ် ရုံး Email – mgfgolf2018@gmail.com အဖွဲ့ ချုပ်ရုံး Viber – 09-7870 22 506 …
NewsBy admintin July 13, 2018
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် The Future Collegians World Tour ( FCWT ) Junior Golf Tournament ၌ မြန်မာဂျူနီယာ အားကစားသမား စည်သူရဲရင့် ပထမဆုရရှိခဲ့သည့်အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ခြင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တွင် ( ၂၃.၂.၂၀၁၃ မှ ၂၄.၂.၂၀၁၃ ) ရက်ထိ ကျင်းပခဲ့သော The Future Collegians World Tour (FCWT) Junior Golf Tournament ၌ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဂျူနီယာ ဂေါက်သီးအားကစားသမား စည်သူရဲရင့်သည် နောက်ဆုံးနေ့ရိုက်ချက် (၆၇) ချက် ရိုက်ပြီး နှစ်ရက်ပေါင်း သတ်မှတ်ရိုက်ချက်ထက် (၆) ချက်လျော့ဖြင့် နှစ်ရက်ပေါင်း…
Myanmar Rules School
More than 40 golfing enthusiasts took part in Myanmar’s first ever R&A Level 1 Introductory Rules School early last month. The two-day event in Yangon at the Myanmar Golf Club saw the group take part inaseries of classroom teaching and practical demonstrations of the game’s most significant Rules. Significantly, inachange from…